Ku wad waddo aad u badan oo leh Landingi's Bogga Soo Degitaanka ee WordPress | Martech Zone
Ku wad waddo aad u badan oo leh Landingi's Landing Page Dhise loogu talagalay WordPress
Arbacada, Maarso 3, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
In kasta oo suuqleyda badankood ay si fudud foom ugu geliyaan bogga WordPress, taasi maahan daruuri in sifiican loo habeeyay, bogga soo degitaanka ee aadka u beddelaya. Bogagga degitaanku waxay caadi ahaan leeyihiin dhowr astaamo iyo faa'iidooyin la xiriira:
Waxyeelada Ugu Yar - Ka fikir bogagga degitaankaaga inay yihiin dhammaadka wadada oo leh carqalado yar. Raadinta, baararka dhinac, cagaha, iyo waxyaabo kale ayaa ka jeedin kara booqdahaaga. Dhismaha bogga soo degida ayaa kuu oggolaanaya inaad bixiso waddo cad oo loogu beddelayo adigoon ka jeedin.
Isdhexgalka - Marka hoggaamiye loo beddelo boggaaga degitaanka, waxaa muhiim ah in hoggaanka loo dhiibo qofka ku habboon AMA lagu shubo olole kobcin si loogu kaxeeyo iyaga si ay u noqdaan macaamiil.
Tijaabada A / B / x - Bogagga degitaanku waa inay lahaadaan cunsur kasta oo kala duwanaan ah oo si sahlan loo tijaabin karo loona cabbiri karo si ay uga caawiso suuqleyda tayadoodii heerka beddelaadooda.
Funnels - Awoodda lagu tarjumi karo kanaga safarka iibsadaha lagu qiyaasi karo talaabooyinka funnel iibka waxay kaa caawineysaa inaad fahamto dhaqanka isticmaalehaaga si aad u kordhiso kaqeybqaadashada marxalad kasta.
Nuqul - Hal bog degitaanku uma shaqeeyo si la mid ah bogagga degitaanka ee la bartilmaameedsaday. Waxtarka nuqul sameynta iyo habeynta bog kasta oo soo degaya ee suuqa bartilmaameedka ah ee aad dooneyso inaad beddesho ayaa kaxeyn doonta kaqeybgal dheeri ah… iyo ugu dambeyn dakhli.
Dhismaha Bogga Soo Degida Landingi
Landingi waxay bixisaa dhammaan xalalkan iyo in ka badan. A waxa aad aragtaa waa waxa aad hesho (WYSIWYG) jiido & dhicid, bogga dhisme ee bilaa sumad ahaanta ah ayaa kuu suurta gelinaya inaad si deg deg ah u rogto, nuqul u sameyso, isla markaana aad u sameysid koox bogag deg deg ah oo ka soo jeeda 300 + sheybaar… ayaa kuu keydinaysa waqti aad u badan.
Barxaddu waxay awood kuu siineysaa inaad sameyso imtixaanno A / B ah oo aan xad lahayn oo xitaa aad u dirto mashiin talobixin ah si aad uga dhigto bogaggaaga degitaanku mid la mid ah waxyaabaha ku habboon
Landingi sidoo kale waxaa ka mid ah jadwal qorsheeye oo adag si uu u bilaabo oo u dhammeeyo ololayaashaada si otomaatig ah.
Ka faa'iidayso 40+ isku-dhafka, falanqaynta, dabagalka, iyo aaladaha beegsiga si aad u wanaajiso waxtarka dadaalka suuqgeyneed. Gudubku wuxuu horseedaa ku dhawaad ​​suuqgeyn kasta oo iimaylka ah ama aaladda CRM ee aad isticmaalayso, ku dhexgal xalalka sida Mailchimp, HubSpot, SalesForce, iyo Zapier.
Landingi waxay kicisay dad badan
Haddii aad rabto inaad riixdo xitaa is-beddello badan, oo kicinaya soo-saar ku saleysan ujeedka ka-bixitaanka, waqtiga goobta, ama qoto-dheerida ayaa hagaajin karta awooddaada qabashada hoggaanka ama ugu yaraan helitaanka emaylka booqdaha si aad ugu riixdo olole kobcin ah. Landingi ayaa bixisa intaas uun!
Degitaanka Bogga WordPress Plugin
Xal u helida bogga soo degitaanku waxay badanaa kaaga baahan tahay inaad wado ku dhex mariso subdomain, laakiin Landingi waxay bixisaa a WordPress Plugin halkaas oo aad si toos ah ugu daabici karto bogga soo degitaankaaga WordPress goobta!
Ku Bilow Degsiinkaaga Soo Degitaanka WordPress Tijaabo Bilaash ah
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Landingi oo waxaan isticmaalayaa iskuxirayaashaas maqaalkan.
Tags: ujeedada bixitaankaka bixitaanka ujeedka ka soo baxadeg deg bogga dhisedegitaanka plugindegitaanka plugin wordpressboggaga soo degayasoo degitaankapopup kiciyabogagga soo degida wordpressplugin WordPress
Tafaariiqda iyo Isbedelada Iibsiga Macaamiisha ee 2021